iPhone 13 အသုံးပြုသူများသည် Apple Watch နှင့်သော့ဖွင့်သောအခါအမှားများကိုအစီရင်ခံသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိန်ဂျယ် Gonzalez | 25/09/2021 18:00 | iPhone ကို 13, NOTICIAS
၏ဆိုက်ရောက် Covid-19 ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌အပြောင်းအလဲများစွာကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သည်ကပ်ရောဂါစတင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသောမျက်နှာဖုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကန့်သတ်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကို Face ID ဖြင့်သော့ဖွင့်ပါ။ ဧပြီလတွင် Apple သည် Apple Watch မှတဆင့်သော့ဖွင့်စနစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအတည်ပြုမှုစနစ်ကို သုံး၍ Face ID ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ iPhone 13 အသစ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးသောအခါပြဿနာများကိုအစီရင်ခံသည် Apple သည်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်မကြာမီ update တစ်ခုထုတ်ဖွယ်ရှိသည်။
Apple Watch ဖြင့် iPhone 13 ကိုသော့ဖွင့်ရန်အမှားများ
အသားအရေကို ၀ တ်တဲ့အခါ Apple Watch နဲ့ iPhone ကို Unlock လုပ်ပါ။ သင်သည်မျက်နှာဖုံးနှင့် Apple Watch ကို ၀ တ်ထားသည့်အခါ၎င်းကိုဖွင့်ရန် iPhone ကိုမြှောက်။ ကြည့်နိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမည်သို့သတ်မှတ်ပုံနှင့်အသုံးပြုပုံကိုလေ့လာပါ။
ဒီ၏ရည်မှန်းချက် သော့ဖွင့်စနစ် ရှင်းပါတယ်။ Terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန် Face ID သုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Apple ဟာငါတို့က iPhone ကိုသော့ဖွင့်မယ့်သူတွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုဖို့ပြင်ပလုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုရှိရမယ်။ ၎င်းသည် Apple Watch သို့ဝင်လာပြီး device ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိသည်။ အတည်ပြုပြီးနောက်မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားစရာမလိုဘဲ springboard ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးသောကာလ၌ iPhone 13 အသစ်ကိုအသုံးပြုသူများ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးရန်အခက်အခဲရှိနေသည်။ သူတို့သည် Apple Watch ဖြင့်သော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါအမှားသတင်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသည်။
Apple Watch နှင့် ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ Apple Watch ကိုသော့ဖွင့်ပြီးသင့်လက်ကောက်ဝတ်တွင်သေချာထားပြီး iPhone ကိုသော့ဖွင့်ပါ။
ဖြတ်. Reddit အချို့သောသုံးစွဲသူများသည်ဤအမှား၏အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ရန်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်သည်စတင်ချိန်တွင် iPhone 13 သည်သော့ခလောက်ကိုထုတ်ပေးပြီး၎င်းသော့ကို သုံး၍ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန် Apple Watch သို့ပို့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအမှားကဘာဖြစ်လဲ iPhone 13 သည်၎င်း၏သော့ခလုတ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ function သည်အကြောသေနေပြီးစက်နှစ်ခုစလုံး၏ဆက်သွယ်မှုသည်မဖြစ်ပေါ်ပါ။
Apple ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ iOS 15 ကိုအဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ဗားရှင်းဖြန့်ဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်။ Apple မှ၎င်းတို့အနေနှင့်အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရမည်ဟုယူဆလျှင် iOS 15.0.1 ကိုစတင်ဖြန့်ချိရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် developer Betas ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်တွေမှာဖယ်ရှားထားတဲ့ SharePlay ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုပြန်ယူလာမယ့် iOS 15.1 ကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » NOTICIAS » iPhone 13 အသုံးပြုသူများသည် Apple Watch သော့ဖွင့်ရာတွင်အမှားများကိုအစီရင်ခံသည်
Darth koul ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာ။ ငါ update ကိုစောင့်နေပြီ။
Darth Koul သို့စာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည် pro 13 max နှင့်ကြုံရသည်
Esteban Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တော့ငါကဒီပြသနာရဲ့ဒဏ်ခံရသူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ကဒါကိုမြန်မြန်ဖြေရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်၊ ဒီလိုအဆင်မပြေမှုမျိုးကိုဒီစျေးရဲ့စက်မှာဖြစ်ပေါ်တာကိုလက်မခံဘူး။
Jesús R. ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကငါတို့ကိုအရူးလုပ်တယ်။ Movistar eSIM မှ လွဲ၍ လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံခဲ့သည်
Jesús R ကိုပြန်ပြောပါ။
ငါ iPhone ကိုပြန်ယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကို iPhone အသစ်အဖြစ်ပြန် ယူ၍ backup လုပ်ထားကိုတင်ပြီး၎င်းကို Apple မှကူညီသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် iPhone 13pro ရှိသည်။
Mac ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကျွန်မကို configure လုပ်ခွင့်မပေးပါဘူး။ တူညီတဲ့အမှားတစ်ခုရခဲ့တယ်။
ငါ IPhone 13 နဲ့ငါ့ကိုမထားခဲ့ဘူး !!!! ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပြန်ယူတာ၊ ဖျက်တယ်၊ ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ညှိတယ်
ယခုသင် Safari တွင်စိတ်ကြိုက်နောက်ခံထားနိုင်သည်